किन व्हाइट लेबल SEO साझेदार पत्ता लगाउन महत्त्वपूर्ण छ?
यो पोष्ट सबै एजेन्सीहरूलाई समर्पित गरिएको छ जुन व्हाइट लेबल एसईओ टोलीमा तिनीहरूको खोजी इन्जिन अनुकूलन आउटसोर्स गर्न चाहन्छ. आज, सिल्लल्ट विशेषज्ञहरूले आउटसोर्सिंगको प्राथमिक फाइदाहरूको व्याख्या गर्नेछन् र निर्धारित गर्दछ कि यस्तो व्यवसायिक मोडेल तपाईंको लागि उपयुक्त छ.
सोच्ने बारे सोच्नु हुन्छ कि सेतो लेबल संग साझेदारी गर्ने एसईओ पुनर्विक्रेता तपाईंको व्यवसायको लागि सही हो? निम्न प्रश्नको जवाफ दिन हामीले पहिले केहि विवरणहरू स्पष्ट गर्नैपर्छ. त्यसैले, बिन्दुको नजिक.
सानो र मध्य आकारको एजेन्सीहरू प्रायः सबै भन्दा साधारण प्रश्नहरु जुन आउट आउटसोर्सिंग एसईओ तिर आफ्नो यात्रा सुरु गर्छन् निम्न हुन्:
) 1. आउटसोर्सिंग व्यवस्था कसरी कार्य गर्दछ?
तपाईंले आउटसोर्सिंग कम्पनी छनौट गर्दा तपाईलाई ध्यान दिनु पर्ने कुरा भनेको हो कि टीम समन्वयन गरिएको छ र पर्याप्त अनुशासन प्राप्त गर्न को लागी काम प्राप्त भयो. सम्झनुहोस्, यदि टोलीका सबै सदस्यहरू थाहा पाउनेछन् जब काम गरिनेछ र डिलिभरेबलहरू के हुन्, त्यसपछि त्यहाँ तपाईंको कम्पनीले त्यस्तो दृष्टिकोणबाट फाइदा उठाउने अधिक संभावनाहरू छन्।.
ध्यान राख्नुहोस्, सबै एजेन्सी गतिविधिहरू ट्रयाकिङमा एक केन्द्रीकृत प्रणाली हुनुपर्छ. साथै, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि डिलिवरी योग्यहरू स्पष्ट छन् र तपाईंसँग बुझ्नको लागि लगातार मूल्य निर्धारण छ.
2. डिसेभरबलहरूलाई कसले आउटसोर्सर्स एसईओ पुनर्विक्रेतालाई कार्य पछि नियन्त्रण गर्नेछ?
जब तपाईं आफ्नो व्यवसाय कार्यप्रवाह बहिष्कार गर्नुहुन्छ, यो मतलब छैन कि तपाईंले के गरिरहनु भएकोमा नियन्त्रण गुमाउनु हुन्छ. केवल किनकि स्रोतहरूले अर्को एजेन्सीको लागि काम गर्न सक्दछ यसको अर्थ होइन कि तपाइँ के हुन्छ भने तपाइँमा कुनै कम प्रभाव हुनुपर्दछ. कम्पनीहरू आउटसोर्स एसईओ हेर्छन् भने, उनीहरूलाई 100% उत्तरदायी र उनीहरूको प्रतिक्रियामा रुचि राख्ने एक टोली फेला पर्दछ.
निम्न अभिविन्यास संग समुहहरु तपाईंलाई नियंत्रण देखि बाहिर महसूस नहीं गर्नेछन्. बरु, तिनीहरूले तपाईंलाई प्रगतिमा अद्यावधिक राख्नेछन्. सेतो लेबलको साथ राम्रो काम गर्ने सम्बन्ध एसईओ एजेन्सीले भनेको छ कि तपाई सँधै ग्राहक डिलीवरीबल बारे निर्णयहरू गर्न निःशुल्क हुनुहुन्छ.
3. के म एक व्हाइट लेबल एसईओ एजेन्सी बाट कुनै पनि रिपोर्टिङको अपेक्षा गर्नुपर्छ?
हो, तपाई चाहिए. रिपोर्टिंग कुनै आउटसोर्सिंग अभियान को एक अभिन्न भाग हो. उच्च गुणस्तर रिपोर्ट र तथ्याङ्कहरू शक्तिशाली उपकरणहरू छन् जसले तपाईंको कार्यप्रवाहमा अधिक नियन्त्रण प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ. उनीहरूले साइट मालिकहरूलाई बुझ्न मद्दत गर्छन् कि सबै समय र सँधै सही रूपमा डेलिभर गरिरहेको छ.
प्रत्येक एजेन्सीको रिपोर्टिङको फरक दृष्टिकोण छ, यो महत्वपूर्ण छ कि तपाइँ टोलीका सदस्यहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ र हेर्नुहोस् कि कसरी लचीलो सेतो लेबल एसईओ कम्पनी तपाईको आवश्यकताहरु पूरा गर्न.
तपाईं एक मात्र व्यक्ति हो जुन निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ कि तपाईंको र तपाईंको व्यवसाय को लागी सही छ. यसबाहेक, एजेन्सी प्रयोग गर्न धेरै फाइदाहरू छन् जुन पहिले नै प्राप्त भएको छ: स्केलको अर्थव्यवस्था र उच्च प्राविधिक क्षमताओं. यस्तो कम्पनीको साथ साझेदारी गरेर, तपाईं आफ्नो व्यवसाय बढाउने फोकस गर्न यो सजिलो हुनेछ.
धेरै एजेन्सीहरूले पहिले नै यो साबित भएको बेला, सेतो लेबल प्रयोग गर्दै एसईओ एजेन्सीको विकासको लागि छिटो बाटो हो भने सही भएमा. तथापि, तपाईलाई सम्झना छ कि चयन प्रक्रियामा निरिक्षण यस यात्रामा अनिवार्य छ.
हामी आशा गर्छौं, अब तपाई सेतो लेबल SEO पुनर्विक्रेतासँग साझेदारीको महत्त्व बुझ्न सक्नुहुन्छ Source .